INduna yenkosi isolwa ngokweba imfuyo | News24
INduna yenkosi isolwa ngokweba imfuyo
Sikhosiphi Mthembu, ILANGA
Durban - Kuqubuke ezinye izinsolo ezingezinhle ngenduna yesizwe sakwaShezi eNkandla, iphephandaba ILANGA elike labika ngayo phambilini ukuthi kutholakale inkomo yelunga lomphakathi emzini wayo - obesekuphele iminyaka idukile - isiyiphawulile.
Leli phephandaba lithole ukuthi ngenyanga esedlule, kutheleke abantu emzini kaFana Ngidi beyolanda izinkomo okusolwa ukuthi zebiwe. Kuthiwa lezi zinkomo zitholwe seziphawuliwe, okwenza abantu basole ukuthi lokhu kwenziwa ngenhloso yokudukisa umkhondo.
Umthombo weLANGA okule ndawo, uthi isimo simuncu endaweni njengoba kulokhu kuqhubeka njalo kutholakala izinkomo zabantu esibayeni senduna.
"Into ecasula abantu kakhulu wukuthi induna idayisa inyama, okudidayo wukuthi isikhathi esiningi iyidayisela abantu bangaphandle, hhayi abasendaweni. Konke lokhu kwenza sisole ukuthi ziningi izinkomo zabantu ezibulawayo zidayiswe,” kusho umthombo
Uthi kunabantu baseKhombe khona eNkandla abalahlekelwe yizinkomo eziyisi-8, eyodwa yazo kuvela ukuthi itholakale esibayeni sikaNgidi.
OLUNYE UDABA:Induna iboshelwe ukudlwengula indodakazi
USkhumbuzo Mthiyane ongumunye wabantu abebelahlekelwe yizinkomo ezakhe ezingu-8, uthi eyakhe uze wayilanda esikiti oNdini, enyakatho yeKwaZulu-Natal yize ubesezwile ukuthi ibisesibayeni sikaMnu Mngadi.
Uthi uMngadi ubize amaphoyisa ayithatha inkomo yakhe yize ebesezwile ukuthi ngeyakhe. Utshele ILANGA nalezi ezinye izinkomo uyazifuna ngoba kusobala ukuthi induna inolwazi ngokuduka kwazo. "Sezizonke izinkomo zami ezilahlekile ziyisi-8 kodwa ngathola eyodwa.
"Ngize ngasebenzisa u-R5 000 okuyizindleko zokuyilanda lapho ibisithuthelwe khona (oNdini). Kuyangixaka ukuthi kungani engazange awazise umphakathi ukuthi kunezinkomo ezisesibayeni sakhe angazazi njengoba eze wabiza amaphoyisa sengizwile ukuthi ikuyena. UNgidi ngimtshelile ukuthi ngiyazifuna nalezi ezinye izinkomo zami ngoba kuyacaca ukuthi unolwazi lokuthi zikuphi," kusho uMnu Mthiyane.
Ethintwa uNgidi ngalolu daba, uvele wabhoka ngolaka ebuza ILANGA ukuthi ngubani olinike inombolo yakhe. “Ngubani okutshele ukuthi mina ngeba izinkomo? Udaba lwezinkomo ngalubika emkhandlwini (wenkosi), wena uma ufuna ukuzwa ngalo woza emkhandlwini ungakhulumi nami," kubhoka uNgidi.
Ebuzwa mayelana nabantu abafike kwakhe beyolanda izinkomo zabo, uNgidi usole ILANGA ngokufuna ukudicilela phansi igama lakhe.
"Wena inhloso yakho wukungidelela, ngubani okunikeze inombolo yami ukuba uzongidelela? Kakukho nkomo engiyebile mina futhi uma ufuna ukuzwa ngalokho woza emkhandlwini weNkosi uShezi," kusho uNgidi maqede wavala ucingo.
Undunankulu wesizwe sakwaShezi, uMavondwe Ngonyama, ethintwa yileli phephandaba uthe usengcwabeni kodwa uma lifuna ukuzwa kahle ngalolu daba maliye emkhandlwini wenkosi.